अफगानिस्तानमा सुतिरहेका बेला गोली चलाउँदा २३ जाना आफ्नै सहकर्मी सुरक्षाकर्मी मारिदिए ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /International/अफगानिस्तानमा सुतिरहेका बेला गोली चलाउँदा २३ जाना आफ्नै सहकर्मी सुरक्षाकर्मी मारिदिए !
अफगानिस्तानमा सुतिरहेका बेला गोली चलाउँदा २३ जाना आफ्नै सहकर्मी सुरक्षाकर्मी मारिदिए !
एजेन्सी । अफगानिस्तानको पूर्वीक्षेत्रमा पर्ने घाज्नी प्रान्तमा भएको घ’ट’नामा परी २३ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।
प्रान्तीय परिषद्का प्रमुख नासिर अहमद फाक्विरीले शनिबार भएको आन्तरिक घ’ट’नामा परी उनीहरुको मृ’त्यु’ भएको जानकारी दिए ।
क्वाराबाघ जिल्लामा रहेको एउटा सुरक्षाचौकीमा सुतिरहेका बेला आफ्नै सहकर्मीले गोली चलाएपछि उनीहरुको घ’ट’नास्थलमै मृ’त्यु भएको उनले बताए ।
शनिबार विहानको समयमा घ’ट’ना भएको अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । घ’ट’नामा परी अरु दुई सुरक्षाकर्मी घा’इ’ते भएका छन् ।
कतारको पूरै सहरमा एसी जडान, जनतालाई जाडोबाट बचाउने रकारको चाहना- विश्वभरी खैलाबैला